I-TC inabasebenzi abangaphezu kwama-500 kunye neendawo ezingaphezu kwe-5,000 zeemitha zokusebenzela ngoku, zonke azinalo uthuli, iindibano zocweyo zobushushu kunye nokufuma, kubandakanya ngaphezulu kwe-1,000 yeemitha zesikwere 100 iindibano zocweyo ezingenalo uthuli. Inkampani ineqela elinamandla lobuchwephesha kunye nolawulo, kubandakanya ngaphezulu kwe-20 yamalungu eqela le-R & D, kukho iinjineli ezingaphezu kwe-50 zobungcali ekusebenzeni, kwizixhobo kunye nomgangatho.
Le nkampani iye 4 COG oluzenzekelayo, imigca imveliso FOG, 5 imigca wokulaminetha oluzenzekelayo ngokupheleleyo, 4 imigca ukuhlangana ilayithi oluzenzekelayo, kunye nokuthunyelwa ebanzi yenyanga 800k iikhompyutha iimveliso, izixhobo esizisebenzelayo ngokupheleleyo ukuqinisekisa ngempumelelo kunye nokuvumelana iimveliso.
I-TC isebenzisa inkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho, iphumelele ukuthembela kunye nokudumisa kubathengi ngobuchwephesha bemveliso ephezulu, umgangatho wemveliso kunye nenkonzo yobungcali, kwaye iseke ubudlelwane bexesha elide bokusebenzisana kunye nabenzi abaninzi abaziwayo basekhaya nabangaphandle. Ngokuvavanya okuphindaphindiweyo kunye nokwenza ngcono, iimveliso ze-TC ziye zafikelela kwinqanaba elikhokelayo kumzi-mveliso kukukhanya okuqaqambileyo, umbala we-gamut, ukugcwala, ukujonga i-engile kunye nezinye izikhombisi.
I-TC ibambelela kwisiseko se "nkonzo yokuqala yobungcali kubathengi, iimveliso ezibalaseleyo zokubuyisela abathengi", kunye nomgaqo "wokukukhonza ngentliziyo epheleleyo, inkonzo yobungcali kunye nokuzinikela", sizimisele ekwakheni uphawu lweTC, kwaye iinkonzo zobungcali ze-VIP zokumisa iinkonzo kuye wonke umthengi, kunye nesisombululo seshishini esikhulileyo, kunye nokugcina igama elihle kwishishini elinye.
I-TC yamkela ngokufudumeleyo utyelelo lwakho kunye nesikhokelo, kwaye sinethemba lokuseka ubudlelwane bexesha elide kunye nawe. Ngaba usakhathazekile malunga nomgangatho wemveliso? Ngaba usaleqa malunga nokuthengisa emva kwemveliso? Nceda ushiyele ingxaki yakho kuthi. Inkampani ijonge phambili ngolangazelelo kutyelelo lwakho, kwaye yamkela ukubonisana kwakho kunye nenkxaso. Ukuba ulindele ukuba ukhethe iqela leengcali, inkonzo ekumgangatho ophezulu, iimveliso zodidi lokuqala, ulinde ntoni, nceda unxibelelane nathi! Enkosi!